Diyaarad siday 128 qof oo ku burburtay Faransiiska – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Diyaarad rakaab oo uu leeyahay dalka Jarmalka, islamarkaana ay la socdeen 148 qof ayaa ku burburtay buuraha Albs ee dalka Faransiiska.
Warar laga helay dalka Faransiika ayaa sheegaya in diyaaraddu aheyd nuuca Airbus A320 oo ay laheyd shirkadda Jaramalka ah ee lagu magacaabo “Lufthansa”, waxeyna ka duushay magaalada Barcelona ee dalka Spain, kuna sii jeeday magaalada Dusseldorf ee dalka Jarmalka.
Madaxweynaha dalka Faransiiska, Francois Hollande ayaa meesha ka saaray rajo laga qabo in diyaadaas dad ka badbaadeen. Dadka la socday diyaaradda ayaa kala ahaa 142 rakaab ah, 2 duuliye iyo 4 shaqaale ah.
Diyaaradda oo duulimaadkeedu ahaa (9525 4U) ayaa kaalmo dalbatay 9:47 waqtiga GMT, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.
Shirkadda diyaaradaha laheyd diyaaraddan ayaa adeegsata diyaarado nuuca Airbus A320 oo shaqeynayey 9 sano, hase ahaayee diyaaradda burburtay oo wadata laambarka (9525 4U) ayaa shaqeyneysay muddo 24 sano ah.